१ लाख ७५ हजारमा बनाई राष्ट्रपतिले बाँडेको पदकमा भएको सूर्य, के एमालेको चुनाव चिन्ह हो?
बुद्धबार, जेष्ठ २२, २०७६ साल,
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बिहीबार शितलनिवासमा २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाका सभासद्लाई बाँडिएको पदक अहिले विवादमा परेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान जारी गरेकोमा स्याबासी दिन पदक दिने काम नै गलत भएको बताएको छ। कांग्रेसभित्र पदक लिएकोले फिर्ता गर्नु पर्ने पनि आवाज उठेको छ।
कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै संविधान बनाउने सभासदलाई चिनारी पदक वितरण गर्ने शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएछन्।
‘संविधान निर्मातालाई चिनारी पदक वितरण गर्ने सुशोभनको शैली स्याबासी दिनेजस्तो भयो। चित्त बुझेन। अझ पदकमा संविधानलाई आड दिने गरी कुदिँएका रेखाहरूको कलात्मक प्रस्तुतिले संविधान निर्माण र स्वामित्वबारे अन्यथा सन्देश दियो भन्ने आमचर्चा छ,’ रिजालले भने, ‘सुशोभनको शैली र पदकको डिजाइनले संविधान निर्माणका लागि भएको बलिदानीपूर्ण संघर्ष संविधानको मर्मभावना र उत्तराधिकारलाई परिलक्षित गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो छ। सम्बन्धित सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु।’
‘संविधान बनाएकोमा स्याबासी लिने गरी पदक बाँड्न हुँदैनथ्यो,’ रिजालले थपे, ‘पदकको डिजाइन पनि मन परेन। त्यहाँ सूर्य चिन्ह छ।’ रिजालले पदक बनाउन झन्डै दुई लाख खर्च भएको दाबी गरे।
उनले पदकभित्र सूर्य चिन्ह राखिएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको पनि बताए। ‘पदकभित्र प्रष्ट देखिने गरी सूर्यको चिन्ह राखिएको छ। एउटा पार्टीले संविधानलाई मोनोपोलाइज गर्न पाइन्छ?,’ उनले भने, ‘आफूले मात्रै संविधान ल्याएको जस्तो गर्ने? मैले सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसबारे आज जानकारी गराइसकेको छु। पार्टीले पदकबारे छलफल गरी निर्णय लिनुपर्छ। कसैले लिएका छन् भने फिर्ता गर्नुपर्छ।’
पदकको डिजाइन बनाएको गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव महादेव पन्थले पदकमा कहीँ पनि सूर्य नराखिएको बताए।
यस्तो छ पदकमा भएका चिन्ह र चित्रको अर्थ
‘सबैभन्दा बाहिरी घेरामा ७७ वटा तारा छ। यसले ७७ जिल्ला बुझाउँछ। त्यसभित्र लालिगुँरास छ। सात वटा लालिगुँरासले सात प्रदेशको अर्थ दिन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘बीचमा धर्का भएको स्थानीय तह हो। यसले ७५३ स्थानीय तह बुझाउँछ।’
उनले सूर्यजस्तो देखिएको त्यो धर्काहरु सूर्य नभएको बताए। ‘स्थानीय तह बुझाउने धर्कालाई सुनौलो बनाइएको छ यसको अर्थ स्थानीय तहको भविष्य उज्वल छ भनेको हो। यो सूर्य होइन,’ उनले भने।
साथै सभासद्लाई दिएको पदकमा दुइटा हात पनि छ। यसले महिला र पुरूष जनाउँछ भने संविधान समावेशी छ भन्ने अर्थ लगाउने उनले बताए।